Ka ciyaar PlayStation 4-ka IPhone-gaaga ama iPad-kaaga mahadnaqa casharradan | Wararka IPhone
Caanaha! Maxay inta badan isticmaaleyaasha Android uga faa'iideysan karaan Remote Play, habka uu Sony ugu oggolaado PC iyo macOS dadka isticmaala inay PlayStation 4 meel fog ka ciyaaraan? Oo maxaa u diidaya dadka isticmaala macruufka? Ha walwelin, waxaan wax walba u haynaa xal, maxaa idinka ahaan lahaa adiga la'aanteed iPhone News ... Maanta waxaan kuu keenaynaa casharro cajiib ah oo wata codsi aad ugu ciyaari karto PlayStation 4 taleefankaaga iPad-ka ama iPhone-ka si fudud oo aan lahayn Jailbreak. Laakiin haddii aad sidoo kale sameyso Jailbreak, waxaad sidoo kale la ciyaari kartaa xakamaynta DualShock 4 lafteeda lafteeda, maxaa khaldami kara? Horay u soco, ha moogaan casharkaan cusub, marka lagu daro, waxaan kuu soo qaadanay hadiyad ay aqristayaasha ugu daacadsan hubaal jeclaan doonaan.
Marka hore, waxaan kuu soo bandhigeynaa PlayCast, waa codsiga ay sameysay Bitwise kaas oo noo ogolaanaya inaan uga faa'iideysano faa'iidooyinka Remote Play qaab aan rasmi ahayn. Waxaan xoojineynaa arrinta "aan rasmiga ahayn", maxaa yeelay sidaad u aragteenba, waa codsi la bixiyay oo aan lagu horumarinin shirkadda Sony. Xaqiiqdii, taasi waa sida ay wax walba ku bilaabmeen, kaliya isticmaaleyaasha qalabka Sony Xperia ayaa ka faa'iideysan kara faa'iidooyinka Remote Play, laakiin si dhakhso leh horumariyayaal badan ayaa bilaabay inay bilaabaan codsiyada loogu talagalay Android iyo PC ee u oggolaanaya isla qalab kasta. Si kastaba ha noqotee, Sony waxay aragtay qayb ka mid ah keega oo siibanaya waxayna go'aansatay inay soo bandhigto codsigeeda u gaarka ah macOS iyo PC. Si kastaba ha noqotee, wuxuu ka tagay macruufka laga tagay, laakiin ragga Bitwise ayaa horeyba u yimid si ay u xalliyaan, in haddii, qiimaha ugu yar ee € 9,99. Tababarka qoraalka ka hor, Waxaan halkaan idinkaga tagayaa muuqaalka oo ah casharradii aan samaynayIntaa waxaa sii dheer, dhexdeeda waxaad ku ogaan doontaa aasaaska tartanka si aad uga qaybgasho isku aadka liisanka PlayCast, arjiga kuu oggolaanaya inaad ku ciyaarto PlayStation 4 iPad-kaaga / iPhone-ka, gebi ahaanba bilaash:
1 Ku rakibidda PlayCast, si toos ah macruufka App Store
2 Waxaan ku habeynaynaa Ciyaar Remote PlayStation-keena 4
3 PlayStation 4 ka ciyaar iPad / iPhone oo leh kontoroole
4 Bixinta koodhka PlayCast
5 Guuleystaha Raffle (Ogast 25, 2016)
Ku rakibidda PlayCast, si toos ah macruufka App Store
Waxaan u tagi doonnaa sida had iyo jeer loo yaqaan 'iOS App Store', xusuusnow, waa muhiim in mar walba codsiyada la helo "si sharci ah", waxaan badbaadin doonnaa dhibaatooyinka amniga mustaqbalka, iyo inbadan oo ka mid ah Jailbreak-kii ugu dambeeyay ee asalka shakiga leh. Waan baari doonnaa Ciyaarta ciyaaraha, waa codsi caalami ah, oo ay soo saareen bitwise. Codsigani wuxuu ku shaqeeyaa qadar doqon ah oo ah 11,5 MB aaladdayada. Waxaa loo tarjumay Ingiriis, Shiine, Jabaan iyo Kuuriyaan, si kastaba ha noqotee, laga bilaabo Bitwise waxay noo ballanqaadeen inay dhawaan bilaabi doonaan cusbooneysiin ay ku jiraan luqadda Isbaanishka Si kastaba ha noqotee, xulashooyinka ayaa ah kuwo aad u fudud oo macquul ah in caqabadda luqaddu aysan si gaar ah u khusayn.
Waxaan ku habeynaynaa Ciyaar Remote PlayStation-keena 4
Waa mid ka mid ah talaabooyinka ugu muhiimsan, waxaan aadeynaa qeybta dejinta PlayStation-keena 4 si aan ugu dhaqaaqno qaabeynta «Adeegso a Masaafada«. Markaad gudaha gasho, waxaan u wareegi doonnaa ikhtiyaarka "ku dar qalab". Markaan galno, waxay na siin doontaa lambar ka kooban sideed lambar iyo qiyaastii 300-ilbiriqsi.
Hada waa goorma Waxaan aadi doonnaa PlayCast oo aan ka diiwaan gelin doonnaa qalabkayaga cusub. Si tan loo sameeyo, waxaan marka hore soo gali doonnaa PSNID-kayaga, waxaan xoojineynaa, waa inaadan galin emaylka, laakiin magacaaga isticmaale, ee aad ku ciyaarto. Qeybta hoose, waxaad gali doontaa nambar siddeed lambar ah oo ay PlayStation 4-kaaga adiga ku siisay dhinaca kore ee midigna waxaan ku riixeynaa «Diiwaan-gelin». Taasi waa sida ugu fudud ee aan u haysan doonno PlayStation 4 oo ku shaqeynaya iPad-ka / iPhone-ka
PlayStation 4 ka ciyaar iPad / iPhone oo leh kontoroole
Waxaan haynaa laba nooc oo kale oo aan qeexeyno:
Dembigu Jailbreak: Halkan halkan ikhtiyaariga ah ee aan haysanno ayaa ah inaan u tagno ilaaliyayaasha Bluetooth oo leh xiriir MFi, taas macnaheedu waa inay la jaan qaadayaan dhammaan qalabka macruufka. Iyaga waxaa ku jira Xiaomi Gamepad oo ah qiimaha ugu fiican ee lacagta lagu beddeli karo, ama Steelseries Nimbus, waxay ku xirnaan doontaa miisaaniyaddaada iyo isticmaalka aad siin doontid.
cunt Jailbreak: Bedelka ugu fiican. Waxaan aadi doonnaa keydka BigBoss waxaanna makiinadda baaritaanka ka heli doonnaa «Maamulayaasha4All«, Tani waa isbeddel noo oggolaanaya inaan ku xirno qalab kasta oo Bluetooth ah iPad / iPhone, haddii ay tahay iyo haddii kaleba waa MFi. Xaaladdan oo kale, adigoo raacaya tillaabooyinka saxda ah ee lagu muujiyey isbadalka laftiisa, waxaad ku ciyaari kartaa PlayStation 4 ee iPad / iPhone si toos ah DualShock 4 ama DualShock 3, oo waliba iswaafajin kara.
Bixinta koodhka PlayCast
Sidee ayey u noqon kartaa si kale, waxaan dooneynaa inaan uxidhno aqristayaasheena koodh u ogolaan doona inay kala soo degsadaan PlayCast bilaash iOS Store Store. Tan awgeed, waxaan uga baahanahay inaad taageerto kanaalkayaga YouTube-ka, kaas oo aan ku sameyneyno waxyaabo cusub oo aad u xiiso badan oo aan ognahay inaad jeceshahay, kuwani waa aasaaska tartanka.
Isku qor kanaalkayaga TodoApple (iPhone News) adoo gujinaya badhanka soo socda:
Tomato comentario un casharka fiidiyowga ee kor ku xusan
Ha iloobin inaad haysato soo dhaweynta farriimaha laga heli karo YouTube, ama ha uga tagin habka loola xiriiro faallooyinka, sida emaylka ama koontada Twitter, si aan u gaarsiino lambarkaaga. Taasna waa mid fudud, waxaad si fudud u badbaadin kartaa € 9,99 oo ah kharashka dalabka.
Guuleystaha Raffle (Ogast 25, 2016)
Hambalyo isticmaale YouTube "TonyKid10".
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » PlayStation 4-ka ka dheeho iPhone-gaaga ama iPad-kaaga adoo adeegsanaya casharradan [VIDEO iyo DHAQANKA]
Ilaa intaan ogahay, Xiaomi kontaroolada gamepad-ku waa MFi mana la jaan qaadayaan macruufka, sida ugu badan ee madcatz ctrli, SteelSeries ama moga haddii ay yihiin.
Ku jawaab diego_nrg
Codsi wanaagsan ayaa umuuqda. Mahadsanid
Jawaab jose angel rocha santos
IPhone 8 oo leh shaashadda OLED? Kaliya "Qoraalka Gaarka ah", sida uu qabo falanqeeyaha
Alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha ee Apple waxay bilaabaan inay ballan-qaadaan deegaanka